अब भारतसँग वार्ता हुन्छ! तपाईहरु ढुक्क हुनुस् ! प्रधानमन्त्री ओली – SaipalNews.com
काठमाडौँ ३१ जेठ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सीमा विवादका विषयमा भारतसँग वार्ता अघि बढ्ने बताएका छन् । संघीय संसदको प्रतिनिधिसभा बैठकबाट संविधान संशोधन विकेयक पास भएपछि बाहिरिने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले भारतसँग वार्ता अगाडि बढाइने बताएका हुन् ।भारतद्वारा अतिक्रमित नेपाली भूभाग कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक समेटिएको नेपालको नक्सा समावेश गर्दै संविधानको अनुसूची ३ को संशोधन विधेयक संघीय संसदबाट पास भएपछि वार्ताको कामलाई अगाडि बढाइने प्रधानमन्त्रीले प्रतिक्रिया दिएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रियताको पक्षमा देश एकजुट हुनु राम्रो भएको उल्लेख गर्दै अब चाँडै भारतसँग वार्ता गर्ने बताएका हुन् । ‘राष्ट्रियता र भौगोलिक अखण्डताको पक्षमा यो बहुत राम्रो कुरा हो । केही साथीहरु अनुपस्थित हुनु बेग्लै कुरा हो । विपक्षमा कोही छैनन् । सिंगो देश एकजुट भएको छ,’ उनले भने ।नेपाली भूमि फिर्ताका लागि संविधान संशोधन भएपनि अबको कदम के हुन्छ ? भन्ने प्रश्नमा प्रधानमन्त्री ओलीको जवाफ थियो,अब छिट्टै वार्ता हुनेछ ।
प्रधानमन्त्रीले थपे,अब वार्ता हुन्छ । अगाडि बढ्छ ।भारतीय अतिक्रमणमा परेका कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटेर सरकारले जेठ ७ गते नक्सा जारी गरेको थियो । त्यसपछि ९ गते संविधान संशोधन विधेयक संघीय संसदमा दर्ता गरेको थियो । नेपालको निसान छापभित्र रहेको नक्सालाई अध्यावधिक नक्साअनुसार बनाउनका लागि सरकारले संविधान संशोधन विधेयक ल्याएको हो । जुन सर्वसम्मतिले प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको छ ।
एमाले राष्ट्रिय महाधिवेशन १०-१३ मंसीरमा हुने